Allgedo.com » 2012 » November » 21
Home » Archive Daily November 21st, 2012
Sanad guuraddii Afartanaad ee Farteena Soomaliga oo lagu qabtay magaaladda Nairobi (Sawiro)
Xaflad si wayn loo soo agaasimay ayaa maalinimaddii shalay ahayd lagu qabtay magaaladda Nairobi ee cariga dalka kenya. Xafladaan ayaa ahayd mid lagu xusayay Sanad guuraddii Afartanaad ee kasoo wareegtay markii la qoray farteena Soomaaliga. Aqoon yahano iyo wariyaal caanka ah Dalkeena Soomaliya ayaa kasoo qayb galay ayagoo si wayn uga faalooday qaabkii iyo marxaladihii kala duwanaaa oo uu soo maray...
Xasuuqa Gaarisa waa mid la filayay (Daawo fool xumada dhacday) – By Abdullahi Ibrahim
Waxaan marka hore salaamayaa shacabka soomaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaana leeyahay asalamu calaykum, salaantaa ka dib waxaan rabaa inaan halkan ku soo gudbiyo qormo yar oo aan kaga hadlayo jariimadii weyneyd ee ka dhacday magaalada gaarisa ee lagula kacay walaalaheena reer gaarisa. Runtii aad baaan uga xumahay dhibaatadii loo geystay dadweynaha reer gaarisa, waana mid aanan ilaawi doonin...
Meydka qof rayid ah oo saakay laga helay magaalada Muqdisho
Waxaa Xaafadda Xararyaale Degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho lagu arkay Saaka ruux mayd ah oo aanan la garan Ruuxaasi halka uu ka Daganaa magaalada. Dadku xaafadaasi ayaa Tilmaamay in uu Ruuxaani meedka ahaa uu ahaa nin dhalinyaro ah laguna arkay mid ka mid ah wadooyinka xaafadaasi. Waxaana Saake la aykayay goobta uu meedka yaalay Dad aad u Fara Badan, kuwaasoo isweydiinayay qof garanaya...
Al-Shabaab oo sheegay inaysan wax lug ah ku lahayn rabshadaha ka jira Islii iyo Gaarisa
Kooxda Al-Shabaab ayaa si adag kaga hadashay xaalada dalka Kenya gaar ahaan rabshadihii ka dhacay magaalooyinka Gaaris iyo Nairobi. Afhayeenka dhanka Howlgalada Kooxda Shabaab Abuu Muscab ayaa sheegay in aysan waxba kala socon cidii ka danbaysay weeraradii ka dhacay Gaarisa iyo Isliii iyagana wax lug ah ku lahayn. Sidoo kale Afhayeenka Xarakadda Alshabaab ee dhinacyada howlgalada C/Casiis Abuu Muscab...
Faah Faahin: Dagaal qasaaro gaystay oo ka dhacay gobolka Gedo
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaalo qasaaro gaystay oo gobolka Gedo ku dhexmaray ciidamo Shabaab ah iyo kuwa dowlada oo kaashanaya Militeriga Kenya. Sida ay sheegayaan Wararka dagaaljan ayaa ka danbeeyay kadib markii ciidamada Shabaab ay weerareen fariisimo ay ciidamada Huwanta ku leeyihiin deegaanka Faafax dhuun ee duleedka magaalada Baardheere Dagaalkaas ayaa waxaa lasoo sheegayaa inuu...
Howlgalo ka soconaya magaalada Beledweyne iyo Shabaab lagu qabtay
Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaas ay ciidamada dowlada ka wadaan howlgalo balaaran. Howlgaladan ayaaa ciidamada waxaa ay ku bartilmaameedsanayaan kooxo lasheegay in ay falal amaan xumo ah ka gaystaan gudaha magaalada iyo deganada kale ee gobolka Hiiraan. Isagoo lahadlayay saxaafada ayaa Taliyaha ciidamada Booliiska Magaalada Beladweyne Cali...